Wariye Daauud Aweys oo lagu wado in loo magacaabo Afhayeenka ... - iftineducation.com
iftineducation.com – ali ] –
Universal TV – Suxufiga Daa’uud Aweys Jaamac oo ka tirsan Wariye-yaasha Somaliyeed, ayaa waxaa maalmaha soo socdo lagu wadaa in si buuxdo loogu magacaabo Afhayeenka Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Afhayeenkii hore ee Madaxweynaha Somaliya, C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), ayaa xilkaasi isaga tagey bishii April ee sanadkaan, ka dib markii 12 bilood uu soo ahaa Afhayeenka Madaxweynaha.
Madaxtooyada Somaliya oo muddooyinkii ugu dambeysay baadi-goob ugu jirtay, shakhsigii bedeli lahaa Afhayeenkii hore, ayaa waxay go’aamisay in lagu bedelo Daa’uud Aweys Jaamac, oo maalmo ka hor ka tagey Idaacada afka Somaliga ku hadasha ee VOA-da.
Waxaa jira ilo wareedyo sheegaaya in Daa’uud Aweys uu durbaba soo gaaray Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho, isla-markaana uu Madaxweynuhu saxiixay Wareegtadii lagu soo magacaabi lahaa. Waxaana la suggaa waa Madaxtooyada oo si rasmi ah ugu dhawaaqdo.
Daa’uud Aweys, ayaa waxaa lagu tilmaamaa Suxufi rug-cadaa ah, muddo badana ka soo shaqeynaayay Warbaahinta, iyadoo VOA-da ka hor uu ka hawlgeli jiray Idaacada BBC-da, laanteeda afka Somaliga.